Sentarada dalka oo doonayo in tallaabo laga qaado wasiirka arrimaha gudaha – The Voice of Northeastern Kenya
Sentarada dalka oo doonayo in tallaabo laga qaado wasiirka arrimaha gudaha
Guddiga aqalka sare ee dalka u qaabilsan xisabaadka iyo maalgashiga ayaa soo jeediyay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr.Fred Matiangi, xoghayaha wasaaradda waxbarashada Dr. Belio Kipsang iyo guddoomiyaha guddiga qaran ee dhulalka Maxamad Swazuri.
Mas’uuliyiintan ayaa looga fadhiyaa inay faahfaahin ka bixiyaan sababta keentay in la bixiyo lacag magdhow ah oo la xiriirta dhulka muranka dhaliyay ee ku yaallo degaanka Ruaraka ee ismaamulka Nairobi.
Dhulkaasi oo laga dhisay laba dugsi ayaa lahaanshihiisa lagu muransanyahay.
Warbixin uu guddigan hor keenay aqalka sare ayaa lagu sheegay in Dr.Matiangi oo horay u soo noqday wasiirka waxbarashada loo baahanyahay in lala xisaabtamo si baaritaano loo sameeyo.
Xubnaha guddigan ayaa soo jeediyay in hadii wax dembi ah lagu helo wasiirka la maxkamadeeyo.
Waxaa loo haysta sababta keentay in wasaaradda tacliinta oo sanado ka hor uu hoggaaminayay ay u bixisay 1.5 bilyan oo magdhow ah.
Dr. Belio Kipsang, xoghayaha wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa isna loo haystaa inuusan tixgelin waxyaabo loo soo jeediyay.
Warbixinta lagula taliyay Kipsang ayaa waxaa lagu xusay in dhulka laga dhisay dugsiyada uu yahay mid dowladeed.
Sido kale agaasimaha waaxda dambi baarista ee dalka George Kinoti iyo guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa lagu booriyay inay baaritaano ku sameyaan gudomiyaha guddiga qaran ee dhulalka ee NLC Dr. Maxamad Swazuri.
Swazuri ayaa isna lagu eedeyay inuu qeyb ka ahaa qorsho si aanan habboonayn loogu bixiyay lacagaha dadweynaha.
Senetarada ayaa sido kale su’aal geliyay sababta wasaaradda dhulalka aysan u dhameystirin soo saaridda sabar loogooyinka.
Arrintan muranka dhalisay ayaa ah sida ay ku suuragashay in dhul dowladeed oo dugsiyo laga dhisay cid sheegatay magdhow loo siiyay.
Warbixinta guddiga xisabaadka iyo maalgashiga ee aqalka sare maanta ayay senetarada ka doodayaan hadii waxyaabaha la soo jeediyay ay la dhacaana , baaritaano ka dhan ah mas’uuliyiinta la carabaabay ayaa la guda galaya.
← Dowlada Soomaaliya oo sharaxday mowqifkeeda Khilaafka Sucuudiga iyo Canada.
DEG DEG: Dhulgariir xooggan oo ku dhuftay markale wadanka Indonesia →